Nzvimbo dzekushanyirwa muTurkey
Dai 20, 2022 Shubham Sharma zvinhu zvekuita, Teki
Nzvimbo dzakanakisa dzekushanyirwa muTurkey iIstanbul, Efeso, Bodrum, uye Kapadhokiya. Turkey ndiyo imwe yenzvimbo dzakanakisa dzekuona. Iine musimboti wenhoroondo yekare neunyanzvi hwakanaka. Heino rondedzero yenzvimbo dzepamusoro
Nderipi bhangi rakanakisa muKorea?
Dai 16, 2022 Shubham Sharma Banks, Chammhembe Koria
KB Kookmin Bank ndiyo hombe muSouth Korea. Iine midziyo inosvika 422 trillion, Korean Republic yakahwina, muna 2020. Neine 387 trillion Korean Republic yakahwina mumidziyo, Shinhan Bank inouya yechipiri. Kufembera kwechikamu chezvemari cheKorea
Nzvimbo dzekutengesa dzakanakisa muParis
Dai 13, 2022 Shubham Sharma Paris, zvinhu zvekuita
Kana iwe uchishanyira France, unofanirwa kushanyira mall akanakisa. Chinhu chakanakisa ndechekuti hapana chausingakwanise kuwana ipapo. Gadzirira kunakidzwa nekutenga kwakanakisa muFrance kune mamwe emaguta ane hunyanzvi. Vamwe
Nzira yekuvhura sei bank account muRussia?
Dai 12, 2022 Shubham Sharma Banks, Rashiya
Iwe unogona kuenda kubazi nepasipoti, chikumbiro chakanyorwa, uye kupedzisa chibvumirano cheakaundi yebhangi. Vanogona kukubvunza nezve nhamba yako yekuzivikanwa yemutero (TIN). Uye ivo vanogona kubvunza nezve yako yega inishuwarenzi account nhamba (SNILS). Izvi
Ndeipi mutengo wekugara muIraq?
Dai 11, 2022 Shubham Sharma Iraki, mari
Mutengo wekurarama kumunhu mumwechete muIraq wakatenderedza 730,000 Iraqi Dinars, kana mazana mashanu emadhora ekuUS, pamwedzi. Mutengo wekurarama wemhuri yevana muIraq wakatenderedza 500, kana 2,400,000 US Dollars,
Nderipi bhangi rakanakisa muNigeria?
Dai 7, 2022 Shubham Sharma Banks, Naijeriya
Mabhangi epamusoro muPeru
Dai 7, 2022 Shubham Sharma Banks, Peru
BCP, BBVA Peru, Scotiabank Peru neBanco Internacional ndiwo mabhanga makuru mana. Iyo ine gumi neshanu mabhangi epasi rose sevhisi pamwe nevanopa mari shoma (Cajas Munez, Cajas Rurales uye Edpymes). Ivo zvakare vanopa masevhisi senge nyanzvi dzezvemari, masangano ekurenda
Nzira yekuvhura account yekubhangi muIndia?
Dai 7, 2022 Shubham Sharma Banks, India
Kuti uvhure account yekubhangi muIndia, munhu anonyorera anofanira kunge aine runyorwa rwemapepa anodiwa nemabhangi ese ehurumende yeIndia uye ekutengesa kuzadzisa Ziva Mutengi Wako (KYC) zviyero. MuIndia, uko hurumende iri kuedza
Wepamusoro mashanu mabhangi muNepal
Dai 6, 2022 Shubham Sharma Banks, Neparo
Mabhangi akakosha kune wese munhu, kana kunyangwe kubatanidzwa, mune izvi. Nezvinangwa zvekuchengetedza, mabhangi ndiwo sarudzo yekuchengetesa zvakachengeteka kubhadhara uye kuitisa mashandisirwo kana kuchengetedza mari. Mamwe akasiyana masevhisi akadai sezvikwereti anogona kushandiswa
Mabhangi akanakisa muSingapore
Dai 6, 2022 Shubham Sharma Banks, Singapowo
Singapore inonyanya kuzivikanwa senzvimbo yezvemari yepasirese uye yakakosha Asia hub yekutarisira hupfumi uye inishuwarenzi. Masangano anodarika zana nemakumi mashanu anotora dhipoziti, anosanganisira mabhanga akazara, mabhanga akazara anokodzera, mabhanga azere nerevatengesi, uye mabhizinesi anopa mari, anoumba mabhanga eSingapore.
1 2 3 ... 19 Next Posts»